Amabhishi Ahamba Phambili Neziqhingi ZasePhilippines (Ingxenye 1) | Izindaba Zokuhamba
Izikhangibavakashi asia | | EPhilippines, Ukuhamba kwe-Asia
Uma uthanda amabhishi okuphupha lapho-ke kufanele ubeke EPhilippines ku-radar yakho. Kuyindawo enhle yokuphumula ehlobo.
Ukuhlela kahle lolu hambo, kufanele wazi okuningi ngeziqhingi zalo namabhishi alo, ngakho-ke bhala phansi amathiphu ukuze ungaphuthelwa okuhamba phambili.
3 U-El Nido, uPalawan
Yizwe eliyisiqhingi ngakho lenziwa izinkulungwane zeziqhingi. Lokho kwenza kube nzima ukwamukela wonke amachips lapho uthatha isinqumo sokuhamba yingakho kulula ukucabanga ngomzila kahle. Izindiza zangaphakathi ziyinsakavukela yingakho hlola ikhasi leCebu Pacific, inkampani yezindiza ebiza kancane.
Kungaphezulu kokuncane kune- Iziqhingi eziyizinkulungwane eziyi-7 eziyikhulu zihlukaniswe izifunda ezintathu: iLuzon, okuyilapho iManila, inhlokodolobha, Mindanao y AmaVisai.
ELuzon ungahamba ngomlando Manila futhi ubone ifa lasentshonalanga, kepha futhi ungahamba phakathi amasimu erayisi okuhle okungaba cishe amahora ayisithupha kude.
Kukhona amasimu eBatad, Banaue, Sagada naseBontoc futhi ungahamba wedwa noma ubhalisele ukuvakasha futhi wazi, isibonelo, iBontoc neSagada ohambweni olufanayo.
Yebo, inesimo sezulu esiyinkimbinkimbi ngakho-ke kunenkathi eyomile, eyodwa enomswakama nenkathi efudumele, ethanda ukoma. Owokuqala uqala ngoMashi kuya kuMeyi, imvula phakathi kukaJuni noNovemba bese kuthi owokugcina ube ngoDisemba kuya kuFebhuwari. Kuhlala kushisa njalo.
Ekugcineni, ingabe ugonyiwe? Kuyadingeka ukuthi ube ne- Imithi yokugoma iTetanus, Diphtheria, neHepatitis A kanye neB. Ukwazi konke lokhu manje sesingadlulela ezindaweni ezihamba phambili ngaphakathi ePhilippines.
Kuyinto a isiqhingi esihle esingamakhilomitha angaphezu kuka-300 ukusuka eManila, eVisayas Islands. Cishe ingamakhilomitha-skwele ayi-10 endaweni kanti amabhishi ayo ayenze yaba ngenye yezindawo ezithandwa kakhulu izivakashi.
Ayinaso isikhumulo sezindiza Ngeyayo, ngakho-ke ifinyelelwa ngolwandle kusuka esiqhingini esingumakhelwane iPanay kanye nechweba layo, iCaticlan. Ungafika lapho ngendiza noma ngesikebhe esiqhingini esingumakhelwane noma usuka eManila. Uzobona empeleni ukuthi zimbili izikhumulo zezindiza ezingomakhelwane okunikelwa njalo: ICaticlan neKalibo.
Ngesinye isikhathi kunoma yikuphi, kufanele uhambe ngomhlaba uye ethekwini bese usuka lapho uthathe isikebhe. Isikhumulo sezindiza UCaticlan Isondele futhi umzila womhlaba cishe imizuzu emihlanu kuyilapho ama-90 kuyimizuzu ehlukanisa itheku lase Kalibo. Ezokuthutha zishibhile kakhulu, yebo.
Uhambo ngesikebhe oluya esiqhingini saseBoracay, ngaphezu kwesikebhe yisikebhe, futhi lushibhile futhi lufushane kakhulu, imizuzu emihlanu nolwandle oluzolile. Ngakolunye uhlangothi ungathatha ibhayisikili elinamasondo amathathu ukuze ufike lapho uhlala khona.
Boracay ihlukaniswe yaba izindawo o barangay's. Indawo eheha kakhulu, lapho kunemigoqo nezindawo zokudlela, yiYapak barangay, enyakatho. Bese kuba khona iBalabag barangay, maphakathi, futhi eningizimu yiManoc-Manoc barangay.
Ukukhuluma iqiniso lawa magama ngeke uzwe okuningi, ngeke uze uwabone nakumagazini wokuvakasha noma kumabhulogi ngoba ngokuvamile bayabizwa Station I-1, i-2 ne-3.
Ngakho-ke, iSiteshi 1 siyinhlanganisela ye- Iqembu ukuphila ngokuthula kakhulu, kukhona konke okuncane. Manje uma uhamba ogwini kancane ufaka u-yebo ISiteshi 2 esiwumgogodla weqembu, umsindo nokumasha.
Ukulandela indlela ufika eSiteshini 3, okuwulwandle lokuthula. Izindaba ezimnandi ukuthi azikho ngaphandle kwezindawo zokudlela, izitolo, izitolo ezinkulu kanye nezitendi zezipho kunoma yiziphi zazo.
Uma uthanda i-adventure ungafika lapho ngesikebhe ukusuka eManila Kepha wuhambo olude kakhulu, lwamahora angaba yisishiyagalolunye, kodwa okubalulekile ukufika futhi uthokozele elinye lamabhishi alo angamashumi amathathu.
Impela kukhona okudume kakhulu kunabanye: I-White Beach Yilona olusendaweni yokuqala ngamakhilomitha alo amane amhlophe. Kukhona futhi i- Ibhishi iDiniwid futhi i IPukka noma i IBulabog Beach, okungcono kakhulu kitesurfing noma ukuphehlwa komoya.
U-El Nido, uPalawan
Futhi kumaVisaisa yisifundazwe sasePalawan kanye naso inhlokodolobha iPuerto Princesa. Isigamu sishiyiwe futhi saziwa njenge umkhawulo wokugcina wemvelo wasePhilippines.
Enyakatho kunamanzi acwebezelayo, izimbali ezicebile nezilwane nezilwandle ezimhlophe. Yindawo lapho ikhona I-El Nido neTaytay, izindawo ezimbili zezivakashi kubalulekile. Zibonakala ngokuma kwezindawo ezinamawa e-limestone nobuhle ngenhla nangaphansi kwamanzi nge izinhlanzi namakhorali ngisho nezimfudu zasolwandle.
Ungafika ePalawan ngendiza futhi ukuhambisa lapho usebenzisa ibhasi. Awukwazi ukuyeka ukuvakashela i- ICoron Reef, ethekwini legama elifanayo: amachibi ayisikhombisa azungezwe amawa, indawo enhle yokubhukuda ne-snorkel phakathi kwezinsalela zemikhumbi nezindiza ezivela eMpini Yezwe Yesibili.
El IPaki Likazwelonke LaseMfuleni iPuerto Princesa Izokwembula umhlaba omuhle ongaphansi komhlaba walo mfula ophumela olwandle futhi ocebile ngokuhlukahluka kwemvelo. Leli paki nenye ipaki yasolwandle, i- ITubbataha Reef, kumenyezelwe IGugu Lomhlaba le-UNESCO.
Uma uthanda ukuhambisa ungavakashela indawo yokudoba yase San Vicente esiseduze nePuerto Princesa. Ufika esikebheni futhi ujabulele uLwandle lwaso olude lwamakhilomitha ayi-14 esihlabathi esimhlophe njengofulawa.
Kuseningizimu yesiqhingi, eCentral Visayas. Inamabhishi amhlophe amhlophe futhi idume ngendawo enhle ebukeke kahle ebizwa ngokuthi yi-Chocolate Hills: inqwaba yamagquma amatshe ayindilinga asabalala phezu kwesiqephu somhlaba esingamakhilomitha-skwele angama-50.
Ihlukaniswe nesiqhingi saseCebu, enye indawo ethokozisayo, ngomugqa ngakho kulula ukufika nokudlula. IVirgin Island iyintelezi, inolimi lwayo olumhlophe olugezwa kuwo womabili amalwandle ngasolwandle, kanye neLamanoc Island, isiqhingi esise-Anda esesikhukhuleke kakhulu futhi namuhla ukubukeka kwalesi siqhingi kungokwedwala kunokuntanta olwandle .
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuhamba kwe-Asia » EPhilippines » Amabhishi Ahamba Phambili Neziqhingi ZasePhilippines (Ingxenye 1)
IKaiurán, idolobha lamaSulumane angama-300 eTunisia
Ukuvakashelwa kwe-Gastronomic e-Andalusia (II)